यी ११ सपना : जसले मानिसको मृ’त्युको संकेत गर्छ – Jagaran Nepal
यी ११ सपना : जसले मानिसको मृ’त्युको संकेत गर्छ
काठमाडौं । राति सुतेको बेला हरेक मान्छेले सपना देख्ने गर्छ । भने सपनाले जीवनमा घ’ट्ने अनेकौ घ’टना वा कुराको संकेत गर्दछ । कतिपय व्यक्तिको सपना पुग्ने पनि गर्छ ।
कसै कसैले देखेको सपनाको ठिक विपरित पनि हुन जान्छ । सपनाले मानिसको मृ’त्युबारे पनि अगाडी नै संकेत गर्दछ । धेरै मानिसहरुको भनाइमा, कोही नजिकका, आफन्त तथा प्रियजनहरुको मृ’त्युको अगाडी अनौठो सपना देखिन्छ। धेरै मानिस जम्मा भएको, कोही नचली ढल्केर बसेको सपना देखेको केही दिन पश्चात प्रियजनको मृ’त्युको खबर आइपुग्छ।
मृ’त्युको सपना, म’रण अनि वि’योग सबैभन्दा दु’खद छण हुन ।याद गर्नुहोस् कुनै मानिसको मृ’त्यु भन्दा अगाडी यी ११ सपना देखा पर्दछ ्र१. कालो रंग:कालो रंगको अर्थ हुन्छ, थाह नभएको, अ’चेतन, ख’तरा, रहस्य, अ’न्धकार, मृ’त्यु, शो’क, ति’रस्कार, घृ’णा वा द्वे’ष।
यो रंगले तपाइला‍इ तपाइको अ’चेतनमा हेर्नको लागि उ’क्साइरहेको हुन्छ, तपाइलाइ आफ्नो बारेमा बुझ्न डा’किरहेको छ कालो रंगले। प्रेमको कमीलाइ पनि जनाउँछ, अनि सहयोग गर्नेहरुको कमी भएको जानकारी दिन्छ। साथै यसले सफा अनि खालीकुरा लाइ पनि जनाउँछ। तपाइमा केही सम्भावना लुकेर बसेको छ साथै केही अवसरहरु आउन बाकीँ नै छ भन्ने पनि जनाउँछ।
२. सर्प:अर्थ लागाउन गाह्रो संकेत हो सर्प। फरक/ फरक संस्कृति अनुसार फरक फरकनै धारणा छ सर्पको बारेमा। भ’याकन ड’रको संकेत देखि ज्ञान र शान्तिको पनि अर्थ लगाइन्छ सर्पलाइ लिएर। ३. कालो बिरालो:सदियौं देखि कालो बिरालोलाइ रहस्य र कालो जादुको प्रतिकको रुपमा लिइन्छ। कालो बिरालो सपनामा देख्नाले अ’सुरक्षा बढ्ने बुझिन्छ। कुनै थाह नभएको कुराबाट तपाइमा ड’र पैदा हुदैछ भन्ने पनि बुझिन्छ। नराम्रो साइतको जानकारी पनि दिन्छ यस्तो सपनाले।
४. दाँत झ’र्नु:सपनामा दाँत झ’रेको देखेमा कोही नजिकको मानिसको मृ’त्यु हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर दाँत दुखेको समयमा सुतेको बेला पनि यस्ता सपना देखिने हुन्छ।५. कालो चरा:कालो चरालाइ ‘मृ’त्युको जानकार’ पनि भनिन्छ। जहाँ मानिस म’रेका हुन्छन् त्यहाँ कालो रंगको चरा वा कागहरु देखिने गर्छन्।६. बच्चाको स्याहार:सपनामा कुनै बच्चालाइ स्याहार गर्दै हुनुहुन्छ अनि बच्चा रुन पुग्यो भने कि सपना देख्नेको मृ’त्यु हुन्छ कि त कोही अत्यन्त नजिकको मानिसको मृ’त्यु हुन्छ।
७. डु’ब्न लागेको मानिसलाइ बचाउदा:सपनामा डु’ब्न लागेको मानिसलाइ बचाउदा, पानीमा हुने आ’त्माहरुले स’जाय स्वरुप बचाउनेलाइ मृ’त्युको स’जाय दिने मान्यता चलिआएको छ।८. यात्राको योजना:यदि सपनामा कुनै ठाँउमा जान योजना गर्दै हुनुहुन्छ वा कतै जाननै लाग्नुभएको छ भने वि’पनामा तत्कालै त्यो ठाँउमा जान नहुने विश्वास गरिन्छ। यस्तो सपनाले मृ’त्युलाइ संकेत गर्ने मानिन्छ।९. दोहोरिने सपना:कुनै सपना दोहोरिन्छ वा उस्तै प्रकृतिको सपना बारम्बार आइरहन्छ भने त्यस्तो सपनालाइ बे’वास्ता गर्न नहुने बताइन्छ।
१०. नाच्नु अनि गाउनु:सपनामा खुसी हुदै नाच्ने गाउने देखिन्छ भने सपना देख्ने मानिसको ह’त्या हुन्छ भनि विश्वास गरिन्छ। कोहि मानिसले सपनामा शरिरमा तेल लगाइ ग’धा चढेर हिडेको देख्छ भने उस्को तत्काल मृ’त्यु हुन्छ।११। एक्लै पिउनु सपनामा एक्लै बसेर पिउदै गरेको देखिन्छ भने मृ’त्यु नजिक आउदैछ भन्ने बुझिन्छ।